July 2010 | Bur-Imna
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 8:19 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 8:17 AM0comments
အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြင့် ကြံ့ဖွံ့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေ
နိုင်မာန် ။ ။ကြံ့ဖွံ့တို့မှ ဒေသခံပြည်သူတွေကို အခွင့်အရေးအမျိုးမျိုးပေးခြင်းဖြင့် စည်းရုံးရေးဆင်းနေပြီး ပြည်သူအများကလည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာကြောင်း သိရသည်။
“အခွင့်အရေးလိုချင်သူတွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ ကြံ့ဖွံ့ကဒ်ရှိရင် မော်တော်ဘီကယ်လည်းမကြောက်ထိဘူး၊ အခုဆိုလည်း လိုင်စင်မဲ့တွေဖမ်းနေတာဆိုတော့လေ ဖုန်းတွေကအစ လိုချင်ရင် တင်လိုက် ခဏလေးနဲ့ကျလာမယ် အဲဒီလို နည်းတွေနဲ့ စည်းရုံးနေတယ်” ဟု လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲမှ စာပေအရေးလေ့လာသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာ မွန်ပြည်သူတွေအကြား နိုင်ငံရေးပါတီဘက် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသော်လည်း အများအားဖြင့် အခွင့်အရေးလိုချင်သူတွေအတွက် ကြံ့ဖွံ့ပါတီထဲ ဝင်လာကြသည်။
“ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်တွေများလာတာပေါ့ တချို့ စည်းရုံးရေးဆင်းသူတွေက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာလည်းမလိုဘူး ကိုယ့်ဟာနဲ့ ကိုယ်စာရင်းလုပ်ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးစရာတောင်မလိုဘူး အလိုလို အသင်းဝင်ဖြစ်သွားရောပဲ” ဟု အစည်းရုံးခံထားသူ ရေးမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 3:07 AM0comments
အခက်အခဲကြားမှ ပါတီဝင်အင်အားထောင်ကျော် စည်းရုံးနိုင်ခဲ့
July 27st, 2010
လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ။ ။မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွင် မွန်ပြည်သူတို့၏ ထောက်ခံအားပေးမှုထောင်ကျော်ကို အခက်အခဲအကြားမှ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပါတီဥက္ကဌက ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ စည်းရုံးရေးဆင်းရာမှာ တပတ်ကြိုတင်ခွင့်တောင်းထားရခြင်း အစရှိသည့် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် စည်းရုံးရေးမှာ လွတ်လပ်မှုမရှိသော်လည်း ပြည်သူတို့၏ ထောက်ခံအားပေးမှုမှာ အားရသည့်အနေအထားပင်ဖြစ်သည်။
“မဲကော်မရှင်က ကန့်သတ်ထားတာကိုလည်း မချိုးဖောက်မိအောင်၊ ကိုယ့်အလုပ်လည်း ချောမွေ့အောင်တော့ စည်းရုံးရတယ်လေ၊ ကိုယ်လုပ်တာကလည်း တရားဝင်လုပ်တာပဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာမလိုဘူး၊ လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုအပေါ်မှာတော့ တော်တော်အားရတယ်၊ ခရီးစဉ်လည်း အောင်မြင်မှုရရှိတယ်” ဟု မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဌ နိုင်ငွေသိမ်း (နိုင်ဇနူး) က ပြောသည်။
ပါတီမှ ရေး၊ သံဖြူဇရပ်၊ လမိုင်း၊ မုဒုံနှင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ ပါတီဝင်အင်အား တစ်ထောင့်လေးရာကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်ကာ နေပြည်တော်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်ပြထားပြီ၊ လက်ရှိတွင် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်တွင် စည်းရုံးရေးဆင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။ ထိုနောက် ပေါင်မြို့နယ်ဘက်သို့လည်း စည်းရုံးရေးခရီးဆက်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုလပိုင်းအတွင်းက ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တို့နှင့်အတူ ပါတီဝင်အင်အား တစ်ထောင့်လေးရာကျော်ကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြထားသည်။
“အစက မွန်ပြည်သူတွေက မဲကို ဘယ်သူ့ကို ထည့်ပေးရမှာလဲ၊ တချို့ဆို ဘာမှတောင်မသိဘူး မွန်ပါတီ တစ်ပါတီရှိတယ်ဆိုတာတောင် တချို့က မသိကျဘူး၊ အခုလို ကျနော်တို့ကနေ အနီးကပ် စည်းရုံးရေးဆင်းတော့မှ ပြည်သူတွေက မဲထည့်ဖို့ မွန်မှာ ပါတီရှိတယ် ဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတာကို သိတော့ စည်းရုံးရေးမှာ အောင်မြင်မှုရရှိလာတာပေါ့” ဟု နိုင်ငွေသိမ်းက ဆက်ရှင်းပြသည်။
“တချို့က အစွဲအလန်းတွေရှိတယ်၊ ကြောက်ကြတယ်၊ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ထောက်ခံရင် အားပေးရင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေက ကျနော်တို့ မွန်ပြည်သူတွေမှာ အစွဲလိုရှိနေကြတယ်” ဟု နိုင်ငွေသိမ်းက ဆိုပါသည်။ သို့သော် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေီပါတီတို့က တရားဝင်အနေဖြင့် စည်းရုံးသည့်အတွက် ပြည်သူများကလည်း ကြောက်စရာမလိုကြောင်း မိမိမဲထည့်ချင်သည့်ပါတီကို ထည့်ခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံရန် ရွည်ရွယ်ထားသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက မွန်အမျိုးသားထုတစ်ရပ်လုံးနှင့် မွန်ဒေသအဝှမ်းရှိ တိုင်းရင်းသားများအား ကိုယ်စားပြုကာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီကို ယခုနှစ် ဧပြီလ (ရ) ရက်နေ့တွင် အငြိမ်းစား အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊ တတ်သိပညာရှင်များ၊ မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဝင်အချို့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အနားယူခဲ့သည့် ပါတီဝင်အချို့တို့ဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
မေလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီအား ပါတီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၃) ဖြင့် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:06 AM0comments
ီJuly 22nd, 2010
မင်းအာသံ ။ ။ ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား တစ်ပတ်ကြာ ပိတ်ထားလိုက်သည့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်သူများ မြဝတီမြို့မှာ ခေတ္တရပ်နားနေရကြောင်း သိရသည်၊၊
၄င်းတို့သည် အများအားဖြင့် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ကြပြီး ပွဲစားမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြမည့် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဖြစ်ကြောင်း ပွဲစားတို့က ပြောသည်၊၊
“လူတွေတော့ တော်တော်နည်းသွားပြီး၊ ထိုင်းကို တက်မယ့်လူတွေ တစ်နေ့တစ်နေ့ အယောက် ၆၀ လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်၊ အရင်ကဆို ရာကျာ်တယ်၊ အခုလိုဂိတ်တွေပိတ်ထားတော့ ဝင်ဖို့ခက်တယ်၊ စောင့်ရတာပေါ့၊ သူတို့မသွားဖြစ်ဘူးဆိုရင် အကုန်ကျွေးထားရတယ်” ဟု ပွဲစားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ပွဲစားနှင့် နီစပ်သောသူတစ်ဦးကလည်း “အခုလိုမျိုး တံတားပိတ် ဂိတ်တွေပိတ်တော့ ထိုင်းတက်မယ့်လူတွေ ဒုက္ခရောက်တာပေါ့၊ ပွဲစားတွေလည်း ခေါ်လာသမျှ လူတွေကို မြဝတီမှာ ထားထားရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ပွဲစားကျတော့ အခက်အခဲသိပ်မရှိဘူး၊ တရားမဝင်လမ်းကနေ သူတို့ဂိတ်ကနေ ခိုးဝင်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်၊၊
ဒီကေဘီအေလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိသည့် ပွဲစားများက ယခုလို ထိုင်း-
မြန်မာချစ်ကြည်ရေး တံထားပိတ်သော်လည်း ထိုအဖွဲ့တို့၏ ဂိတ်မှတဆင့် ဝင်ထွက်နိုင်သည်။ အကြောင်ကာ အဆိုပါ ဒီကေဘီအေဂိတ်သည် ဖွင့်စမြဲဖြစ်နေသောကြောင့် ပွဲစားများအတွက် ယခုကဲ့သို့ လွယ်ကူစေခဲ့သည်။
မြန်မာအာဏာပိုင်မှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်- မြဝတီ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပိတ်ပင်ထားသော်လည်း အချို့သော တရားမဝင်ဂိတ်တွေက နာရီပိုင်းဖြင့်ဖွင့်ထားတာရှိသည်ဟု မဲဆောက်စက်ရုံးတစ်ရုံမှ မြန်မာအလုပ်သမား မသူဇာ (အမည်ရင်းမဟုတ်) က ပြောသည်၊၊
“ကျမတို့ နေ့တိုင်းမဲဆောက်ကို လာနေရတယ်၊ တရားမဝင်ဂိတ်ကနေ ပိုက်ဆံပေးပြီး ကူးလို့ရတယ်၊ ကျမတို့အတွက် အရမ်းကို အခက်အခဲဖြစ်တယ်၊ မြန်မာဘက်က တရားမဝင်ဂိတ်တွေတောင် ဖွင့်ချင်ရင် ဖွင့်ပြီး ပိတ်ချင်လဲ ပိတ်လိုက်တယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်၊၊
အာဏာပိုင်နှင့် နီစပ်သူများ နှစ်ဖက်သား နားလည်မှုနှင့် လှေခသက်သာစွာဖြင့် သွားလာနေကြောင်း ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သည့် မြဝတီဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်၊၊
မဲဆောက်မြို့မှာ ခြေချထားသည့် ကရင်အမျိုးသားတစ်ဦးက “ကျနော် တရားမဝင်ဂိတ်ကနေ မြဝတီသွားခဲ့တယ်၊ စိတ်ထဲမှာတော့ အရင်တိုင်းပါဘဲ၊ မခက်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ဗမာပြည်ကနေ လာရင် အခက်တွေ့လိမ့်မယ်၊ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ဆို ပေးမဖြတ်ဘူး” ဟု ၄င်းက ပြောသည်၊၊
ယခုလို နှစ်နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေးတံထားကို အာဏာပိုင်တို့မှ ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်မှုရှိနေပြီး ကုန်သည်များ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြသည့် အလုပ်သမားများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေကြကြောင်း ဒေသခံတို့၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာအာဏာပိုင်မှ ယင်းချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ပိတ်လိုက်ခြင်းမှာ ကမ်းထိန်းနံရံ ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် နယ်ခြားသောင်းရင်းမြစ် ရေစူးထိုးရာတွင် မြန်မာဘက်ခြမ်း၌သာ ရေထိုးပြီး ကမ်းပြိုမှုများ၏ အကျိုးဆက်ကို ခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကန့်ကွက်ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ခေတ်ပြိုင်သတင်းဌာနမှာ ထုတ်ဖော်ထားသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:05 AM0comments
ထုံးအိုင်ရွာ အထက်ပိုင်း တိုက်ကျောင်းကြီး မီးလောင်
မော်လမြိုင်ဈေးကြီး မတော်တဆ မီးလောင်းကျွမ်းမှုဖြစ်ခဲ့သလို ထုံးအိုင်မှာလည်း မီးလောင်းခဲ့သည်
လရီထော ။ ။ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့နယ်ရှိ ထုံးအိုင်ကျေးရွာအထက်ပိုင်း တိုက်ကျောင်းကြီးသည် ဖယောင်းတိုင်မီးကူးစက်ရာမှ ကျောင်းတိုက်တခုလုံး မီးလောင်ပြာကျသွားခဲ့သည်။
မီးလောင်ဖြစ်ပွားမှုသည် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီနှင့် ၁၀ နာရီအကြားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ကျောင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျော်က ဆောက်ထားသည့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ကြောင်းကို ကျောင်းဒါယိကာတစ်ဦးက ပြောသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းချိန်တွင် ဘားအံမြို့ရှိ မီးသတ်ဌာနသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီး ၂ နာရီကြာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးမှသာ မီးသက်ကား ၅ စီးရောက်လာခဲ့သည်။ ဘားအံမြို့မှ ထုံးအိုင်ကျေးရွာအကြား နာရီဝက်ခရီးမောင်းနှင်းရသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကျောင်းရှိ ရဟန်းသံဃာများ သံမဏေများ တစုံတရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရရှိမှု မရှိဟု ကျောင်းဒါယိကာက ပြောသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကျောင်းတိုက်ပေါ်ရှိ ရှေးဟောင်းရုပ်ထုများ၊ ဆင်းထုတော်များအပါအဝင် မွန်ရှေးဟောင်း ပေရပိုက် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်မျာပါ ဆုံးရှုံးခံရသည်ဟု ဒါယိကာက ပြောသည်။
မီးထဲပါသွားသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကို အတိအကျ တွက်ချက်မှုမပြုနိုင်သေးသော်လည်း ခန့်မှန်းချေ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး သိန်းပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်ကျော် ရှိနိုင်သည်ဟု ကျောင်းဒါယိကာတို့က ခန့်မှန်းကြသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထုံးအိုင်ရွာသည် မွန်ရွာကြီး တစ်ရွာဖြစ်ပြီး၊ ရှေးအလွန်ကျသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ ၄၀၀၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး တိုက်နယ်အဆင့်ရွာကြီးဖြစ်သည်။
ကျေးရွာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းမှာ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း မူလတန်း ၇ ကျောင်းနှင့် ရဲစခန်း၊ တိုက်နယ်ခွဲဆေးရုံးရှိပြီး၊ သံလွင်မြစ်ကမ်းနံဘေးက ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။
ထုံးအိုင်ကျေးရွာအတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း (၉) ကျောင်းရှိပြီး၊ ယခုမီးလောင်ကျွမ်းသွားသည့် အထက်ပိုင်းတိုက်ကျောင်းကြီးသည် အကြီးဆုံးကျောင်းတိုက်ဖြစ်ကြောင်း ထုံးအိုင်ရွာခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:04 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:03 AM0comments
ဟောင်းဒိန်။ ။ အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွင် ယူနီဆက်ဗလာစာအုပ်ကြေးကို ကျောင်းသူ/သားများက ဝယ်ယူနေရသည်ဟု ကျောင်းသားမိဘများက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြိုနယ် အထက်တန်းကျောင်းခွဲတစ်ခုတွင် ကျောင်းအပ်ခဲ့သည့်မိဘတို့က ဒုတိယတန်း ကျောင်းသင်ရိုးညွန်းတမ်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ် ဗလာစာအုပ်ကြေး ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရသည်ဟု ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားမိဘ မိလှငွေက ပြောသည်။ ဗလာစာအုပ်ကြေး ၅၀၀၀ ကျပ် ပေးပြီး ယူနီဆက်တံဆိပ်ပါ ဗလာစာအုပ်ကိုသာ ရရှိခဲ့သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:02 AM 1 comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:01 AM0comments
ဆိုင်ကယ် ဖမ်းဆီးမှုသတင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ် နှောင့်နှေးမှုရှိ
၂၀၀၈ ခုနှစ် မြေနီကုန်းယာဉ်ရပ်နားစခန်းအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးနေစဉ်
မင်းအဲ ။ ။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်တွေမှာ အာဏာပိုင်တို့မှ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များ ဖမ်းဆီးမည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားခြင်းကြောင့် ဈေးဆိုင်အတွင်း အရောင်းအဝယ် ကျဆင်းမှုရှိနေသည်ဟု ဈေးသည်အသိုင်းအဝိုင်းတို့၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
ဒေသခံအာဏာပိုင်တို့မှ လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များ တရားဝင်အဖြစ် လိုင်စင်ပြုလုပ်ရန် ဇွန်လအတွင်း ကြောငြာထားပြီး သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း ပြုလုပ်မှုမရှိပါက အဖမ်းအဆီးပြုလုပ်သွားမည့် သတင်းကြောင့် ဒေသခံများ အပြင်မထွက်ရဲခြင်းကြောင်း ဈေးအရောင်းအဝယ်လည်း ပါးသွားသည်ဟု ဈေးသည်တို့က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆိုင်ကယ်ဖမ်းဆီးမှုသတင်းကြောင့် မြို့ကြီးဖြစ်သော မော်လမြိုင်မြို့၊ သံဖြူဇရပ်၊ လမိုင်၊ ရေး အစရှိသည့်မြို့ပေါ် ဆိုင်ဖွင့်ထားသူတို့က ရောင်းလိုအား ယခင်ကထက် သုံးပုံတပုံလောက်ကျဆင်းမှုရှိသည်ဟု မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှ ဈေးသည်တစ်ဦးက ပြောသည်၊၊
“အခုလို အာဏာပိုင်တွေ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် သွားလာတဲ့လူတွေလည်း နည်းသွားတယ်၊ အရောင်းအဝယ်လည်းပါးသွားတယ်၊ အားလုံးကလည်း လိုင်စင်မဲ့ပဲ စီးနေကြတယ်ဆိုတော့လေ၊ မော်တော်ဘီကယ်တွေကလည်း လမ်းတိုင်း အကွေ့တိုင်းမှာ စောင့်နေကြတယ်ဆိုတော့” ဟု အထက်ပါမော်လမြိုင်မြို့ခံ ဈေးသည်က ပြောသည်၊၊
ယခုကဲ့သို့ ဒေသခံကြားများအကြား ဆိုင်ကယ်အဖမ်းအဆီးသတင်းတွေကြောင့် ဆိုင်ကယ်ကိုသာ အားထားပြီး သွားလာနေကြသူတွေအတွက် အသွားအလာအပြင် ဈေးဝယ်ထွက်သူတွေလည်း နည်းပါးလာကြောင်း မော်မြိုင်ဈေးကြီးမှ ဈေးသည်တစ်ဦးက ညည်ညူးလိုက်သည်၊၊
“ကျနော်တို့ မော်လမြိုင်ကနေ ရေးကို ပြန်လာတာ တလမ်းလုံးမှာ ဆိုင်ကယ်မရှိသလောက် ဖြစ်နေတယ်၊ ခါတိုင်းဆို တလမ်းလုံးမှာ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ မြို့ပေါ်မှာဆို ပိုဆိုးတယ်၊ ရှုပ်ယှက်ကို ခတ်နေတာပဲ၊ လိုင်စင်ရှိတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေပဲ အနည်းအကျဉ်းတွေ့ရတယ်” ဟု ခရီးသွားတစ်ဦးက သူ၏ ကိုယ်တွေ့ကို ပြောပြသည်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဒေသခံတို့က အများအားဖြင့် လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုသာအသုံးပြုကြသည်။ လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်သည် ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးထွက်သည့် Model ကိုလည်း ဝယ်စီးနိုင်ခြင်းကြောင့် အများအားဖြင့် ဝယ်စီးကြသည်။
ယခုလိုမျိုး ဒေသခံများ လိုင်စင်ပြုလုပ်ရန်နှောင့်နှေးနေရသည်မှာ လိုင်စင်ပြုလုပ်ခသည် သာမာန်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးစာကုန်ကျနေသည့်အတွက် အများအားဖြင့် မပြုလုပ်လိုကြကြောင်း လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတို့မှ သိရသည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 7:00 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 6:58 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:56 AM0comments
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:55 AM 1 comments
ဆွိုင်း အနှိပ်ခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမှုဖွင့်
လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ။ ။ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့မှ ဆွိုင်း အနှိပ်ခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် စောသန်းအောင်၏ သေဆုံးသည့်အမှုကို အတူနေ၄င်း၏ချစ်သူက တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့်လိုက်သည်။
စောသန်းအောင်၏ချစ်သူက စောသန်းအောင်သေဆုံးပြီးနောက်တနေ့တွင် ၄င်း၏အသုဘအခမ်းအနားနှင့် ၄င်း၏အမှုကို တရားရုံးတွင် ဖွင့်လိုက်ကြောင်း စောသန်းအောင်၏အသုဘအခမ်းအနားကို တက်ရောက်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းအခမ်းအနားတက်ရောက်သူတစ်ဦးက “သူရဲ့အမှုကို ဖွင့်ဖို့က တရားလိုမရှိ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့အတူနေတဲ့ ဆွိုင်းမှာရှိနေတဲ့ သူ့ချစ်သူက အမှုဖွင့်လိုက်တာ” ဟု ဆိုသည်။ စောသန်းအောင်၏ အသုဘအခမ်းအနားကို ဆွိုင်းမှ ဝန်ထမ်းများက ဦးစီးကျင်းပသည်။
စောသန်းအောင်ကို ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့နံနက် ၉ နာရီခန့်တွင် သုံးဆူမြို့ ရပ်ကွက် (၄) ရှိ ဘိုးဘွားရိပ်သာအနီးတွင် ၄င်း၏လည်းပင်းနှင့်ပါးစပ်ကို ဝါယားကြိုးဖြင့် ချည်းနှောင်ထားပြီး၊ မျက်နှာနှင့် ဦးခေါင်းကို ဓားဖြင့် ခုတ်ထစ်ထားသည်ဟု ၄င်း၏အလောင်းကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသူတို့က ပြောသည်။
မြန်မာဒေသခံအာဏာပိုင်တို့က စောသန်းအောင်၏အမှုမှာ လူသတ်မှုဟု ယူဆသော်လည်း ၄င်း၏သေဆုံးရသည့်အကြောင်းအရင်းကို မသိသေးပေ။
စောသန်းအောင်မှာ ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ့ ၉ နာရီခန့်တွင် ၄င်းငှားရမ်းနေထိုင်သည့်တန်းလျားမှ ထွက်သွားပြီးနောက် ဘိုးဘွားရိပ်သာအနီးတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု စောသန်းအောင်နှင့် နီးစပ်သူတို့က ပြောသည်။ စောသန်းအောင်သည် ဆွိုင်းအနှိပ်ခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ ၃ နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်။
စောသန်းအောင်မှာ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ကေပီစီ- KPC) မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကေပီစီသို့ ရောက်ရှိလာသည်မှာ မကြာသေးဟု ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ဒုခွဲမှူးတစ်ဦးက ပြောသည်။
စာသန်းအောင် ကေပီစီသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းမှ ၄င်း၏စီးပွားရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်ပြီး ကေပီစီမှလည်း စောသန်းအောင်ထံမှ အခွန်အကောက်ရရှိရန်အတွက် ၄င်းအဖွဲ့အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 5:54 AM0comments